Ireo no Mac izay hanohana ny macOS Monterey | Avy amin'ny mac aho
Ny macOS 12 Monterey ofisialy dia natolotra omaly tolakandro tao amin'ny WWDC 2021. Manantena an'ity kinova vaovao ity aho ary efa misy ny Beta-ny ho an'ny fisintomana ary hanomboka handany ny vaovaony vitsivitsy ary bebe kokoa aza ao amin'ny kinova beta voalohany. Na dia azontsika atao aza ny milaza fa "mitohy" io raha oharina amin'ilay macOS Big Sur ankehitriny. Ny tena mahavariana dia ireo antsoina hoe hitsin-dàlana, izay hanatsara kokoa ny fiaraha-miasa amin'ny Mac. Izany no antony namelanay anao eto ambany a lisitra miaraka amin'ireo Mac mifanaraka aminy miaraka amin'ity kinova rindrambaiko vaovao ity.
Apple dia namono ny WWDC 21, nanolotra ny macOS Monterey miaraka amin'ireo fanavaozana ho an'ny iPhone, iPad, ary Apple Watch. Na dia mety tsy macOS Monterey lehibe indrindra amin'ny fanambarana natao tao amin'ny WWDC androany aza, ny fiasa fanavaozana traikefa Safari voaova endrika miaraka amina famolavolana kiheba vaovao ahafahan'ny mpampiasa mahita bebe kokoa amin'ny pejy rehefa mihodina izy ireo. Bara fisolo vava vaovao no maka ny lokon'ny pejin-tranonkala ary manambatra ny kiheba, ny baraovana ary ny sehatry ny fikarohana amin'ny endrika famolavolana tokana.
Ny tena mahavariana dia ny hitsin-dalana, satria efa nisy izy ireo tao amin'ny iOS sy iPadOS ary ity Monterey ity dia mikendry ny ho rafitra fiasa ho an'ny Macs izay mahatonga ny fampidirina amin'ireo mpiara-miasa aminy finday toa hitovy hatrany. Ny symbiosis an'i Apple, izany fampitambarana ny fitaovana isan-karazany izay talanjona foana. Ka mahaliana ny fahalalana fa Mac no azontsika havaozina.
Ireo ny solosaina Mac mifanaraka amin'ny kinova vaovao:
iMac - Faran'ny 2015 ary avy eo
Mac Pro - Faran'ny 2013 ary avy eo
iMac Pro - 2017 ary avy eo
Mac Mini- Faran'ny 2014 ary avy eo
MacBook Air - Tany am-piandohan'ny 2015 ary taty aoriana
MacBook- Tany am-piandohan'ny 2016 ary taty aoriana
MacBook Pro - Tany am-piandohan'ny 2015 ary taty aoriana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Ireo no Mac izay hanohana ny macOS Monterey